Aberto Sonorus 0.3.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.3.5 လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Aberto Sonorus
Aberto Sonorus ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဖြစ်ကသူတို့ကို setting အားဖြင့်အမေဇုံ Alexa မှတဆင့်က Android Applications ကိုစတင်ရန် "smart home ပစ္စည်းတွေကို။ "
အလွယ်တကူ e.g, သင့်စမတ်အိမ်မှာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဤ devices တွေကို add .:
"Alexa, Netflix နဲ့စောင့်ကြည့်", တီဗီနှင့်လက်ခံအပေါ်လှည့်မီး dims သည်အန်းဒရွိုက်တီဗီနှိုးနှင့် Netflix နဲ့ app ကိုလွှတ်တင်။ ထိုသို့ပြုမထားဘူးတစ်ခုတည်းသောအရာပေါက်ပေါက် ( ... သေး) လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေဇုံမှတဆင့်ပြုမိအကောင့်ချိတ်ဆက် - on-device ကို Aberto Sonorus က Android app ကိုဖွင့် setting နှင့် Aberto Sonorus Alexa ကျွမ်းကျင်မှုအားဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အတိုင်းပြုင့်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အန်ဒရွိုက်တီဗီ, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ Android App များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
* Alexa, on / off turn Netflix နဲ့ (ပစ်လွှတ် / application တစ်ခုပိတ်)
Plex အပေါ်ယခင် / လာမည့် * Alexa, (ရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်သမျှလျှောက်လွှာတွင်လာမည့် / ယခင် item ကိုကစား)
* Alexa, Google ဂီတ (ထိုကိရိယာပေါ်တွင်အသံအတိုးအကျယ်သတ်မှတ်) ရက်နေ့တွင်မှ5အသံအတိုးအကျယ်ကိုသတ်မှတ်
သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို pre-လျှို့ဝှက် app များကိုမဆို Enable, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခု launchable app ကိုထည့်ပါ။
Aberto Sonorus အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Aberto Sonorus အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Aberto Sonorus အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Aberto Sonorus အား အခ်က္ျပပါ
densw12 စတိုး 1.17k 222.78k
Aberto Sonorus ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Aberto Sonorus အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.3.5
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://willblaschko.com/apps/privacy.html
App Name: Aberto Sonorus
Release date: 2019-09-16 06:09:31
လက်မှတ် SHA1: 80:3C:57:09:9C:4B:2A:92:51:F7:87:96:C4:9B:A7:E2:43:9D:AD:55
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Will Blaschko
Aberto Sonorus APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ